LUUQADA VIETNAMESE ee Fiyatnaamiiska iyo Ajaanibta - Qeybta 2 - Dhulka Barakaysan ee Daraasadaha Vietnam
Continued lasii wado qeybta 1:
Nidaamka xarfaha Vietnamese
Waxaa jira 29 xaraf ee Nidaamka xarfaha Vietnamese taas oo ka kooban 12 shaqal iyo 17 kayd. Hoos ka daawo liiska:
Meelaha Vietnamese (Isha: IRD Tech Tech)
Sida kor ku xusan, waxaa jira 12 shaqal Nidaamka xarfaha xarfa ee Vietnamese. Waxaa ka mid ah:
Sida loogu dhawaaqo shaqaalahan waa in la raaco hoosta:
Ku dhawaaqida shaqooyinka Vietnamese (Source: Lac Vietnam Computing Corporation)
Hore, dhexe, iyo shaqalaha hoose (i, ê, e, ư, â, ơ, ă, a) aan go'ayn, halka dhabarka dambe (u, ô, o-oobeen). The shaqaalah â [ə] iyo ă [a] waxaa loogu dhawaaqaa mid aad u gaaban, aad uga gaaban mid ka mid ah shaqalada kale. Sidaas darteed, ơ iyo â asal ahaan waxaa loogu dhawaaqaa isku mid marka laga reebo taas ơ [əː] waa muddo dheer â [ə] wuu gaagaaban yahay - isla kan wuxuu quseeya shaqalada dhaadheer a [aː] iyo mid gaaban ă [a].
Diphthongs iyo Tripthongs
Marka lagu daro hal shaqal (ama monophthongs), Fiyatnaamiis ayaa leh diphthongs iyo guulwadeyaal. The diphthongs waxay ka kooban tahay qayb shaqal wacan oo ay ku xigto offvowel offglide gaaban ama booska hore ee sare [ɪ], jago dhabarka sare ah [ʊ], ama jago dhexe [ə]. Eeg shaxda hoose:
Diphthongs Vietnamese, triphthongs (Xigasho: Shirkadda La Xisaabtanka Lac Lac ee Lacagta)
Xaruntu diphthongs waxaa lagu aasaasay oo keliya saddexda shaqal ee sare (i, ư, u) shaqalka ugu weyn. Guud ahaan waa loo higaadiyaa sida ia, .a, ua markay dhammeeyaan eray oo loo higaadiyo iê, ươ, uô, siday u kala horreeyaan, markay raacaan shibbane. Waxa kale oo jira xayiraad saaran dul-qaadista sare: offglide-ka hore ee hore ma dhici karo kadib marka la haysto shaqalka hore (i, ê, e) Nucleus iyo dusha sare ee dusha sarena ma dhici karaan kadib markii la dhaariyo dhabarka (u, ô, o) Nucleus.
Xiriirka ka dhexeeya orthography-ka iyo ku dhawaaqida waa mid dhib badan. Tusaale ahaan, offglide-ka [ɪ] badiyaa waxaa loo qoraa sida i hase yeeshe, sidoo kale waa la matali karaa y. Intaa waxaa dheer, ee diphthongs [aɪ] Iyo [aːɪ] xarfaha y iyo i sidoo kale tilmaamayaan dhawaaqa shaqalka weyn: ay = ă + [ɪ], ai = a + [ɪ]. Sidaas darteed, tay / "Gacanta" waa [taɪ] halka tai / "Dheg" waa [taːɪ]. Sidoo kale, u iyo o Muuji dhawaaqa kala duwan ee dhaarta weyn: au = ă + [ʊ], ao = a + [ʊ].
The afar triphthongs waxaa lagu sameeyay ku darida hore iyo gadaal dambiyada bogga dheellitirka diifthongs. Sidoo kale xayiraadaha ku lug leh diphthongs, a guulwadeyn leh Nukliyeerka hore ma yeelan karo marin hore oo xagga hore ah (ka dib markii dhexe ee wareega ah) iyo a guulwadeyn leh Nuclearka dhabarku ma yeelan karo dib-u-dhac xagga dambe ah.
Marka laga hadlayo xagga hore iyo gadaal dillaacyada [ɪ, ʊ], sharraxaadda cod-bixinno badan ayaa u falanqeeya kuwan sida loo yaqaan 'kelidii' duulaya /j, w/. Markaa, eray sida âu "Halkee" [əʊəʊ] noqon lahaaəw/.
Way adag tahay in dhawaaqyadaan la dhawaaqo:
Dhalashooyinka Vietnamese ee dhalaalaya (Isha: IRD Tech Tech)
… Sii wad qeybta 3…
◊ LUUQADA VIETNAMESE ee Fiyatnaamiis iyo Ajaanibta - Meelaha Fiyatnaamiis - Qeybta 4aad
◊ LUUQADA VIETNAMESE ee Fiyatnaamiis iyo Ajaanib - Wadahadalka Fiyatnaamiis: Salaan - Qaybta 5
(Booqday jeer 4,508, booqashooyinka 6 maanta)
Views Views: 3,110
← LUUQADA VIETNAMESE ee Fiyatnaamiiska iyo Ajaanibta - Hordhac - Qaybta 1aad
LUUQADA VIETNAMESE ee Fiyatnaamiis iyo Ajaanibta - Qunsuliyada Fiyatnaamiis - Qeybta 3aad →
LUUQADAHA HADALKA iyo ARRIMAHA GUUD EE VIETNAM - Qaybta 1
Sheekada TU-THUC - Dhulkii Quruxda badnaa - Qaybta 1
Comments Off on Sheekada TU-THUC - Dhulkii Nasiibka - Qeybta 1
Booqashada Maanta: 208
Booqashooyinka Maalmihii 7 ee ugu dambeeyay: 3,129
Guud ahaan Wadarta: 286,024